Waraaqo Sir ah oo la Soo Bandhigay – Rasaasa News
Jan 19, 2010 ONLF, xaajo
Xaajo Media, oo soo bandhigtay arimo cusub oo aan hore loo maqal iyo waraaqo sir ah, oo ka turjumaya dhagarta ay galeen kooxda Jwxo-shiil, waxayna warqadahan sirta ah si gaar ah farta ugu fiiqayaan Maxamed Ismaaciil [Qaaxo], oo isagu ah ninka abuuray dhibaatooyinka keenay dilka Dr. Dolal.
Waxaa kale oo dadweynaha Somalida Ogadeeniya ay ogaanayaan, munaafaqada aan halgan shaqada ku lahayn, balse aad moodid in ay yihiin aar gudasho iyo arimo aanay dadweynaha Somalida Ogadeeniya wali ogayn waxa ku kalifay Qaaxo iyo kuwa uu qabadsiiyey cudurka.
Halkan ka akhriso sirta ay heshay xaajo.
Qoraalka waxaa qorey Maxamed Ismaaciil Taariikhdu Markey ahayd 29/11/08 waxuuna qorey maalin Sabti ah waxuuna u direy guddida fulinta ee ONLF.
Ujeeddo: Digniin iyo Heegan
Halgameyaal, shacbiga Ogadenya wuxuu si dhab ah ugu qancay halganka gobonimadoonka ay maanta JWXO horseedayso. Dhibaato kasta oo ku soo gaadhay wuxuu gude iyo dibadba garab istaagay Jabhadda, wayna ka guulaysatay cadowgii oon wax uu ula hadhay jirin tirtiridooda.
Waxaa dhibaatada cadowga garab socotay, abaaro soo noqnoqonayey oo gumeysiga awgiis uuna shacbigu ka gaashaaman karin. Colaad kaga imanaysa dalalka deriska ah ee Soomaaliya ugu horeyso. Gumeysigu wuxuu ka sameeyey dalka Soomaaliya kooxo iyo canaasir hor istaagtay in hawlaha halganku sidii loo baahnaa uga hirgala. Hab qabiilka Soomaliya duleeyey meel ay joogtaba waxay saameyn ku yeelatay inay khalad ahaan halgankeena taageeraan. Maadaama dalalka siyaasadda iyo dhaqaalaha lagu qiimeeyo, laguna adeeco ay ku taageersan yihiin gardarada cadowga waxaa iyana yarayd taageeri caakami oo hor istaagtay aqoonsi dibadeed. Taas oo dhiiri gelisay dhega adayga cadowga dhiigyacabka ah. Arrimahaas oo dhan iska daa inay halgankeena burburiyaan ee uma suuroobin inay hakiyaan. Xawli ayuu ku socdaa shacbigiina wuu sii dhiiraday.
Waxaa hadda soo kordhay ifafaale cusub iyo faham noocayada cadowga halganka xaqa ah ee shacbiga Ogaadeenya: Waxaa isu bahaystay JWXO, kuwii gumeysiga Itoobiya u adeegayey hantidii Jabhaddana dhacay, Kuwii ookiyaalaha qaabiilka gashanaa iyo qaar sheeganayey inay Urur gobonimadoon ah yihiin, weliba islaami ah. Taasi waxay inoo caddaynaysaa laba arrimood:
1. In xulufada isu bahaysatay la dagaalanka JWXO (halganka gobonimadoonka) Itoobiya ka dambayso.
2. In Itoobiya hadda adeegsanayso habka ah “iska dhiga wax iga soo horjeeda oo Jabhad ah”.
3. Niyad jab iyo naf lacaarinimo Itoobiya iyo kooxahan is bahaystay, maxaa yeelay dacaayadii iyo dadaalkoodii hore markii ay ku guul daraysteen ayey waan is bahaysanay yidhaahdeen.
Qisada hadda dhacday waxay ku bilaabatay Dolaal iyo Saalaxdiin oo halganka dambi weyn ka galay in la soo hawl geliyey. Waxay aadeen Kenya, Waxay u amba baxeen Xeryaha Qaxootiga si ay wax taageersan uga helaan. Lama hubo inay markii hore la kulmeen safiirka Itoobiya ee Nairobi. Guul kamayna gaadhin, wayna ka soo carareen cabsi darteed. Soo noqodkii Saalaxdiin wuu soo noqday, laakiin, Dolaal wuxuu la kulmay Gen Gabre (dhiigyacabka Soomaaliya haysta). Maalintaas laga bilaabo ilaa hadda qof arkay Dolaal ma jiro.
Waxaa bilaabatay, in la diyaariyo beenta qorshaysan ee aad maqasheen:
Waxaa la soo geliyey, in Dolaal ay S/G kulmeen (mayna dafirin S/G). Waxaa suuqa la soo geliyey – xaga Kismaayuu aaday isaga oo S/G la socda oo Gudihii u sii jeeda (kutidhi Ku teen); Xamar buu yimid isaga oo Gudihii u sii jeeda(kutidhi- kuteen); Waxaa la sheegay inuu Tiyeeglow iyo Ceel Berde sii socday (Ku tidhi-kuteen) ; Wuxuu dagaal ka galay Gabagabo iyo wareysiyo laysku beeg beegay. From Kismaayo ilaa Gabagabo waxaa u dhaxaysay 10 maalmood. Waa inuu Gaadhi toos ah saaraa. Xadka Soomaaliya meel kasta ha ka soo galo waxay ku qaadan lahayd 10 beri meesha ugu dhow haddii uu toos aan hakad lahayn u socdo.
Waxaa ka qayb qaatay beentan Qorshaysan Websityo caan ku ah naca iyo la dagaalanka Halganka Ogadenya. Waxay iclaamiyeen in laba garab oo JWXO ah dagaalameen, beentii ayaa is qaban wayday. Wuxuu Dolaal iyo S/Galbeed sheegeen inay ahayd waxa dagaalamay S/Galbeed iyo waxay ku tilmaameen Garab JWXO ah. Waxay soo qoreen ( Dhanaan, Xaajo, Somali Tribune iyo Kismayonews) bayaan ay S/galbeed soo saartay oo ay ku eedaynayaan JWXO, Dolaal ay u mahad naqayaan -waxaa laga yaaba in qaar madaxda S/G ay telefoonada ku yidhaahdaan lug kuma lihin laakiin mayna beeninin rasmi ahaan.
Waxay JWXO iyo shacbiga Somalida Ogadenya ka faa’iidayaan dhacdan inay ogaadaan colaadda dhabta ah ee Ururka S/G u hayo JWXO iyo halganka Ogaadenya ilaa ay ula bahoobeen burburinta halganka kuwa u adeega gumeysiga, hantidii qaranka laga dhacayna ay kula shirkoobeen; iyo luuqaddan cusub ee cadowgu adeegsanayo oo ah laba JWXO iyo S/Galbeed oo dagaalamaya. Waxaase xaqiiqa ah mar kasta waxaa dagaalami cadowga halganka iyo shacabka oo dhinac ah iyo gobonimadoonka iyo saaxiibka halganka oo dhinac ah.
Qoraalkan oo baraarujin ah daraadeed, waxaan Jaaliyadaha ka codsan inay ka digtoonaadaan khayaanada loo ekaysiinayo gobonimadoon, laakiin uu ka dambeeyo Gumeysiga Itoobiya oo iyadu maal gelisa. Waxaa dhici kara inay is bahaysiga kula jiraan kuwo Soomaaliya ka dagaalama oo horey inooga soo horjeeda.
Mar kasta ood cadowgaa ogaato waa guul kuu soo hoyatay.
Warsaxafaadeedkan ayaa isagana lagu shaaciyey qaar ka tirsan saxaafadda ONLF 3dii bishii Nov ayaa u qornaa sidan:
Bayaan ka soo baxay Hogaanka Warfaafinta Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya.
Ku : Dhamaan jaaliyaadaha Ogadenya Rugtooda
Ku : Dhamaan xubnaha JWXO Rugtooda
Uj : shirqoolada loo maleegayo halganka
Waxaa waayadan dambe soo gaaraya hogaanka warfaafinta warar isa soo taraya oo muujinaya inay gacansaar la yeesheen gumaysiga wayaanaha oy qandaraas ku qaateen sidii dadweynaha la’isaga horkeeni lahaa, xubnihii dambiyada ka galay halganka iyo shacabka Ogadenya ee maxkamadda ay ka qaaday xubinnimadii jabhadda markay ku cadaatay inay galeen dambiyo khayaano iyo dhac hantidii dadweynaha. Waxaa jirta inay dambiilayaashaasi xeryaha qaxootiyada ee Kenya la dhex mareen qabyaalad iyagoo fulinaya siyaasadda cadawga ee ku dhisan kala qaybinta bulshadeena, iyagoo adeegsanaya hanti ay farqaha ugu gunuday safaaradda gumaysiga Kenya u fadhida.
Waxaa kaloo ay xubnaha JWXO ee ku sugan aagagaa soo tabinayaan in labadan dambiile ay shirar la galeen kooxda isku magacawday Midowga Somaligalbeed. Waxaa la yaab leh oo la sugayaa in la ogaado arimaha ay ku heshiin karaan kuwa u ololeeya Midowga Somaligalbeed iyo labadan dambiile oo diin xumadooda la ogyahay, dacwado ka dhan ah bulshada Ogadenya inay yihiin dad asalraac ahna hadda ka hor gaarsiiyay dawlada shisheeye. Khayaanada iyo beenta ay nimankan isbahaystay bilaabeen waayadan waxaa ka mid ah in sawiradii iyo filamadii ciidanka JWXO ee Doolaal iyo Salaaxudiin ay dhaceen ka iibsadaan kooxda Midawga Somaligalbeed la baxday oo lagu soo bandhigay taleefishinka Universal iyadoo la leeyahay waa ciidamadii Somaligalbeed. Ujeedada ka dambaysana waa in cadawga lagu taageero maadaama ay socon weyday beentii Wayaanaha uu doonayay inuu dunida ka gado ee ahayd in ciidamada jooga Ogadenya aanay ahayn CWXO.
Arimahan akhlaaqda saxaafadda iyo diinta islaamka toona aan waafaqsanayn waxay muujinayaan in gorgortanka dhex mari kara labadan dambiile iyo kuwa u ololeeya Midowga Somaligalbeed uu noqon karo un in la hagardaameeyo halganka oo la taageero rabitaanka gumaysiga, taasoo aan marnaba u suurtagali doonin.
Ugu dambayn waxaan uga baaqaynaa dhamaan kuwaa xinqooqa isu bahaysanaya inaysan ka horimaan rabitaanka shacabka Ogadenya. Qof kastoo isku dayay inuu ka hor yimaado rabitaanka shacabka Ogadenya wuxuu ku dambeeyay fashilaad iyo halaag.
4-Waqadda waxaa qorey Sagal Doolaal iyadoo ka cabsi qabtey in aabaheed la dilo waxeyna qoraalkan u dirtey ONLF.
To the ONLF Organisation,
I am writing this letter regarding my father Mohamed Sirad Dolal. It has come to my attention that the organisation in which my father has been involved in for the last 30 years has started to attack him and his colleagues. Recently in Kenya, there was an assassination plotted against my father.The most shocking news regarding this assassination was not that of the Ethiopian organisation arranged this, but that his own people in particular Deane … wanted him dead!
Warqaddan Waxaa qorey Dr Doolaal waxuuna ugu hambalyeeyey Madaxweyne Obama doorashadiisii.
November, 6 2008.